Maalinta: Meey 4, 2020
5,5 Bilyan EURO ayaa loo ururiyey Tallaalka Fayraska Fayraska Corona!
Isbahaysiga Tallaalka ee Caalamiga ah, oo loo aasaasay in lagu taageero horumarinta tallaallada ka dhanka ah fayraska corona, ayaa bilaabay shir lacag-aruurineed oo heer sare ah. Marka laga soo tago Midowga Yurub (EU), dalal ay ka mid yihiin Ingiriiska, Norway, Kanada, Japan iyo Saudi Arabia [More ...]
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ayaa ku dhawaaqay qorshihiisa ku aaddan qaab dhismeedka kadib shirkii golaha wasiirada ee madaxweynaha. Sida lagu sheegay bayaanka baahinta tooska ah, meheradaha sida makhaayadaha wax lagu iibiyo, timo-jarista, iyo meelaha lagu qurxiyo ayaa shaqeyn doona 11ka Maajo. Faahfaahinta Wasaaradda Arrimaha Gudaha [More ...]
Sida laga soo xigtay telefishanka Madaxweyne Erdogan ka dib kulanka golaha, xaddidaadda bandoowga ee meesha ugu horeysa ee kooxda ka weyn 65 ayaa si tartiib tartiib ah loo qaadayaa. Muwaadiniintayada ka weyn 65 sano ayaa xaddidan maalmaha qaarkood ee usbuuca [More ...]
Bandoojinta ayaa la joojiyay 7 Magaalooyin
Sida lagu sheegay bayaanka uu madaxweyne Recep Tayyip Erdogan hawada ka saaray, bandoowgu wuu sii socon doonaa usbuucaan. Sikastaba, bandowyada ayaa laga qaaday 7 gobol waxaana suura gal ah in loo safro goboladaas. [More ...]
Codsi Labale Oo Laga Saaray Istanbul Ankara iyo Izmir Taxis
Iyada oo ujeedadu tahay maaraynta halista cudurka faafa ee coronavirus marka la eego caafimaadka guud iyo kala-dambaynta bulshada, hubinta go'doomin bulsheed, joogtaynta fogaanta bulshada iyo xakamaynta xawaaraha fiditaankiisa, [More ...]
Baadhitaankaagii loo yaqaan 'Covid 19 test' waa mid fiican, laakiin astaamahaagu waa kuwa sahlan ama waxaad dareemaysaa si aad u wanaagsan. Marka maxaad samaynaysaa xaaladdan? Khubaradu waxay sheegeen in bukaannada ku qaadan doona howsha karantiilinta guriga [More ...]
Gawaarida aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan 'ITU Rover Team' waxay gashay kaalinta 36aad iyadoo ay ka mid yihiin 3 kooxood oo ka mid ah tartamada Jaamacadda Rover Challenge tartankan oo ay soo qabanqaabiyeen Mars Society ee Mareykanka. Wuxuu sii wadaa shaqadiisa ku saabsan robotyada sahaminta ee meeraha [More ...]
Maalgashiga Eskişehir OBS wuu sii socdaa si isdaba joog ah
Nadir Küpeli, Gudoomiyaha Gudiga Eskişehir OSB, wuxuu cadeeyay inay sii wadaan shaqadooda maamul ahaan si looga dhigo wax soo saarka warshadaha iyo maalgashiga OIZ jawi degan. Madaxweyne Küpeli wuxuu yidhi, “Horumarka iyo barwaaqada. [More ...]
Coronavirus wuxuu Dhigay dhoofinta ugu badan
Turkey dhoofinta Assembly (TIM), sida ku cad xogta la sii daayay by April ee dhoofisa 45 boqolkiiba dhoofinta Eskisehir on bishii hore, halka wadarta guud ee afartii bilood ee ugu horeysay tusay 12 boqolkiiba hoos u dhac. Eskişehir Abaabulay [More ...]
Isweydaarsiga Buundada Karakoyun iyo Viaduct oo dhameystiran
Isweydaarsiga Buundada Karakoyun iyo Viaduct, oo si weyn u fududayn doonta isku socodka gaadiidka Sanliurfa, ayaa la soo gabagabeeyey. Tilmaamaha Duqa Magaalada caasimada ee Metroanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül, iyada oo la eegayo baaxadda daraasadaha ayaa la dadajiyay in kasta oo uu cudurkan corona ka dillaacay. [More ...]
Shaqada loo yaqaan 'Asphalt Work' ma lagu marin habaabiyo Bandowga ee Eskişehir
Diyaarinta cusub ee Tarsus Çamlıyayla Yolu Intersection ee aagga Konak
Qaban qaabada ayaa kusii socota degmada Mersin ee Magaalada Tarsus halkaas oo qulqulka taraafikada uu amaan yahay oo dhakhso leh. Waxay xiriirisaa degmooyinka Tarsus iyo Çamlıyayla, iyo sidoo kale [More ...]
Gudiga La Talinta Sayniska ee IBB COVID-19 ayaa kulmay Axadii, 3 Mee. Kulankaas kadib, baahida loo qabo bandoowga bandoowga oo tartiib tartiib ah oo loogu talagalay Istanbul oo ka hadlaya bisha Ramadaan iyo kahor. [More ...]
Ololaha Bilaashka ee IMM ee bilaabmay! Marka sidee u shaqeysaa?
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu ku soo bandhigay arjiga “qaansheegta ganaaxa” kalkaaliyaasha caafimaad ee ku dhibtooday howlaha faafa. Faahfaahinta dalabka http://www.ibb.gov.tr İmamoğlu wuxuu cadeeyay in lagu gaadhayo ereyada soo socda: [More ...]
Sivas-Samsun, line Turkey ee tareenka birta marka hore la furay, mid ka mid ah wadada ku saabsan 5 sano oo shaqo ah oo casriyaynaysa ka dib. TCDD oo la xiray 12kii Juun 2015 iyo kaabayaasha iyo heerarka dhismeedka ayaa la soo saaray. [More ...]
Muhiimadihii hore ee Wasaaradda Gaadiidka waa la badalay ..! Tobaneeyo Mashruuc Ayaa La Soo Saaray ..!
Kuxigeenka CHP Niğde Fmer Fethi Gürer wuxuu keenay mashaariicda ay fulisay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha sanadihii hore, laakiin taasi inbadan kuma qaadan, ajandaha TBMM oo soojeedin su’aal ah. Gaadiidka oo ka jawaabaya soo jeedinta Gürer [More ...]
Dalxiiska iyo Howlgalka Bazaar ee Cumhuriyet Street Nostalgic Tram
Wadahadalkii aan la yeelanay Bursa Hayrettin Eldemir, oo ah Gudoomiyaha Gudiga Ilaalinta Dhaqanka Dhaqanka ee Bursa, wuxuu u furay bog u gaar ah taraamka Cumhuriyet Wadooyinka dhexdooda soo jeedinta oo taabaneyn doonta gadiidka marka lagu daro fahamka cusub ee dalxiiska ee Bursa. Söze… “taraamkan ilaa hada lama adeegsan,” ayaa bilaabay kuna nuuxnuuxsaday howsha dalxiiska: [More ...]
Soo-jeedin si loo Raajiyo Gaadiidka iyo Dalxiiska ee Bursa oo leh 3 Taabo
Runta jirta ayaa ah in Bursa dabcan aysan ahayn magaalo la doorbiday fasaxa ciidda-ciidda-qorraxda. Si kastaba ha noqotee, iyada oo ay taariikhdeedii tahay 8 sano oo ay ahayd caasimaddii ugu horreysay ee Cusmaaniyiinta, waa magaalo ay ku kala duwan yihiin xagga dalxiiska ee rasmiga ah. Dalxiis heer kul ah iyo dalxiiskii caafimaad ee dhowaa [More ...]
DHMI ayaa ku dhawaaqday ..! Wadooyinka Diyaaradaha ee Atatürk Airport Maxay Filayaan Maxaa Burburiyay?
Agaasinka guud ee Maamulka Duulista Hawada Dowlada (DHMİ) ayaa bayaan ku saabsan wadooyinka mara garoonka diyaaradaha ee Atatürk markii ugu horeysay. Bayaankaas, 14-ka bilyan ee laamiyada ah ayaa si xun u saameysay soo degitaanka garoonka diyaaradaha ee Istanbul iyo howlaha la wareegidda. [More ...]
Marka la eego baaxadda dagaalka lagula jiro viruska Corona, oo isu beddelay cudur faafa oo caalami ah, raadadkiisana laga dareemay waddankeenna, Warshadaha, Ganacsiga, Wershadaha iyo [More ...]
Wasaaradda Ganacsiga Oo Shaacisay Jaantusyada Dhoofinta Abriil
Sida laga soo xigtay GTS, dhoofinta dhoofinta ayaa hoos u dhacday 41,38% bishii Abriil marka la barbar dhigo isla bishaas tii sanadkii hore oo ay gaadhay 8 bilyan 993 milyan oo doolar. Sababo la xiriira daacuunka, gaar ahaan wadamada EU-da, waa muhiim [More ...]
Adeegyada ay bixiso TÜBİTAK SAGE ee Ankara Wind Tunnel
Xirmooyinka dabayshu waa kaabayaasha loo isticmaalo in lagu tijaabiyo is dhexgalka walxaha leh socodka hawada. Saddex ka mid ah daraasadaha jimicsiga ee naqshadeeyayaasha ayaa ah moodello nambar ah, daraasad tijaabo ah (tijaabooyinka tunelada dabaysha) iyo tijaabooyinka duulimaadka, siday u kala horreeyaan. [More ...]